Mareykanka oo duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaabaya gudaha Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaabaya gudaha Kenya
Dowladda Mareykanka ayaa Kenya ka codsatay in ay duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab ka bilowdo gudaha dalkaas.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Mareykanka qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa dowladda Kenya ka codsaday in ay duqeymo ay ku beegsanayaan Al-Shabaab ka fuliyaan deegaanada Waqooyi Bari ee dalkaas.
Wargeyska New York Times ayaa qoray in Taliska uu codsi u diray Kenya, kaasoo ku aadan in howlgal dhanka cirka ah uu ka fuliyo gobolada Gaarisa iyo Lamu oo la aaminsanyahay in ay meelo ka mid ah ku dhuumaaleysanayaan dagaal yahanno ka tirsan Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ka soo abaabulo.
Sida ku qoran NYTimes, Col. Christopher P. Karns, oo ah afhayeenka guud ee taliska, ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo codsigaas. “Taliska AFRICOM waxay aqoonsanayaan baahida loo qabo in la adeegsado cadaadis caalami ah oo joogta ah oo ka dhan ah Al Shabaab, si loola socdo dhaqdhaqaaqooda, jiritaankooda, loogana hortago fiditaankooda,” ayuu yiri Colonel Christopher oo la hadlay wargeyska.
Dhinaca kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa codsigaan ka hor yimid, iyagoona ka biyo diiday in Mareykanka uu howlgal ka u adeegsado diyaaraha aan duuliyaha laheyn ee drone-ka.
Arintaan ayaa imaaneyso xilii weerar xooggan ay Al-Shabaab horaantii sanadkaan ku qaadeen saldhiga Manday Bay uu Mareykanka ku leeyahay gobolka Xeebta ee Lamu, weerarkaas ayaa Mareykanka looga dilay saddex askari.